🥇 Mmemme maka ịgwọ ọrịa
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 345
Mmemme maka ịgwọ ọrịa
Vidiyo nke mmemme maka ịgwọ ọrịa
Nye iwu maka mmezigharị ahụ ike
Site na mmepe nke teknụzụ kọmputa ọhụrụ, ugboro ugboro, ọgwụ na-achọ usoro nyocha ahụike nke ga-ejikọta mkpa nyocha niile na ụlọ ọgwụ na otu usoro. Ihe ndekọ usoro nlekọta ahụike dị otú a nwere ike inye aka wepu ihe mgbagwoju anya na ụlọ ọrụ ahụike ma mepụta ọrụ dị mma maka ndị ọrụ niile. O di nwute, enwere otutu ihe omuma ogwu di iche iche na ahia nke teknụzụ nke oge a, nke na eme ka mmemme di otua nke ogwu di omimi, ebe ha bu ndi oru. Companylọ ọrụ anyị ga-achọ ịnye gị mmemme dị otú a nke nyocha ahụike, ebe anyị nwere ọpụrụiche na mmemme nyocha ahụike ma nwee ike mejuputa echiche ọ bụla gbasara ahụike. A na-akpọ usoro mmemme ahụike anyị USU-Soft program. Ọ bụ mmemme nyocha ahụike nke jikọtara ọrụ niile nke ụlọ ọgwụ na-enye gị ohere ịme nyocha na ọkwa ọhụrụ! Arụ ọrụ nke usoro ihe omume ahụike USU-Soft dị ọtụtụ ma, yabụ, dabara adaba maka ụlọ ọrụ ọ bụla, ma ọ bụrụ ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ịhịa aka n'ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ophthalmologist. Na mmemme USU-Soft nke nyocha ahụike, ị nwere ike ịnwe nchekwa data onye ọrịa, nke n'aka nke ya dị mma na polyclinic ma ọ bụ ụlọ ọgwụ; onye ọrụ ọ bụla na-abanye usoro mmemme ahụ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịlele akụkọ ahụike, ọganihu ọgwụgwọ, ndụmọdụ ndị dọkịta, wdg.
I nwekwara ike itinye ụzarị ọkụ na kaadị onye ọrịa na nsonaazụ nyocha, nke, n'aka nke ya, na-eme ka njikarịcha nke oge ọrụ na ịchekwa ohere efu na desktọọpụ. Na mmemme mmemme USU-Soft, ị nwere ike ịkọwa n'ụzọ zuru ezu ọrụ onye ọrịa ahụ, nke onye ọrụ ya na ya mekọrịtara, wdg. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịhazi mgbanwe maka ndị ọrụ ma họpụta ndị ọrịa maka oge ụfọdụ. Ọzọkwa, ị nwere ike gbakọọ ọnụ ahịa ọgwụ na mmemme ego, yana tinye ego ha na ọnụ ahịa nke ọrụ ahụ, wdg. Usoro mmemme USU-Soft nwere ikike ịmekọrịta n'ụlọ nkwakọba ihe ma ịnwere ike ịgbakwunye ego na-akparaghị ókè ngwongwo, ọgwụ, ihe oriri, akụrụngwa ahụike, yana ihe a niile bụ ihe akụrụngwa! USU-Soft bụ usoro mmemme pụrụ iche maka ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ; ọ na-agbanwe usoro ọrụ, na-eme ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-eme ka ọrụ kwa ụbọchị dịkwuo mfe!
Nyocha ndị ahịa dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ọrụ gị ka mma, dịka gị, nke mbụ, kwesịrị ịma ihe ndị ọrịa gị na-eche banyere gị. Jiri akara afọ ojuju ndị ahịa na-akpali ndị ọrụ gị. Omume a dị ezigbo mma. Mana enwere ọnya ebe a: ndị ọrụ nwere ike ịtụle ihe ngosi a ka ọ ghara ịkpa ókè na ha ma ọ bụrụ na ọnọdụ ndị karịrị njikwa ha metụtara afọ ojuju nke ndị ahịa (dịka ọmụmaatụ, ikuku ikuku ahụ mebiri, ọ dị ọkụ n'ime ụlọ ahụ ma onye ahịa ahụ enweghị afọ ojuju). Na nke a, usoro mkpali nwere mmetụta na-abụghị nke ya. Iji zere nke a, buru ụzọ chọpụta usoro ọrụ ndị ọrụ ga - eme nke ọma n'ọnọdụ ọnọdụ (dịka ihe mebiri) yana izugbe algorithm nke ọrụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ adịghị n'ọnọdụ (dịka onye ọrịa ahụ kwesịrị ịkparịta ụka ogologo oge. Skype mgbe a na-enye ọrụ ahụ). Ntụziaka ndị dị otú a na-enyere ndị ọrụ gị aka ịhapụ onye ahịa ahụ afọ ojuju ọ bụrụgodi nsogbu na-atụghị anya ya. Ee, anyị bi n’oge mgbe naanị ihe dị iche na onyinye ndị ụlọ ọrụ dị iche iche nke onye ahịa nwere ike ịhụ bụ ihe dị iche na ogo ọrụ. Ihe di iche na ihu oma gi gha eme ka ochicho nke onye ahia gi biakutere gi.
Gini mere ndị ọrịa anaghị alaghachi na nzukọ ahụike gị? N'oge nsogbu, ị nweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị 'soro onye ọrịa ahụ rụọ ọrụ 100% ma mezuo atụmanya ya niile, n'ihi na, ma ọ bụghị ya, onye ọrịa ahụ nwere ike ịchọta ụzọ ọzọ maka gị. Otu n'ime ihe kpatara enweghị ndị ahịa bụ mgbe onye ahịa ahụ chefuru ma ọ bụ chọta ụzọ ọzọ. Iji zere nke a na-eme, ọ dị mkpa iji belata ohere nke onye ahịa iji chefuo gị. Iji mee nke a, mgbe ị na-akwụ onye ahịa ụgwọ, onye nchịkwa kwesịrị ịjụ onye ahịa ma ọ bụrụ na echetara ya ịmeghachi ọrụ ahụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị (dịka ọmụmaatụ, ọkara afọ ma ọ bụ ọnwa abụọ).
Site na ịmepụta aha ndị ahịa dị otú a, ị na-ewedata mfu, na-echetara ndị ahịa nhọpụta ma si otú ahụ na-enye aka na njigide njide ka mma. Arụ ọrụ nke mmemme mmemme USU-Soft na-enye gị ohere itinye ndị ahịa dị otú a na listi nchere, nke mere na mgbe etolite oge maka ọnwa. A na-etinye onye ahịa ahụ na listi nchere ma a ga-enwe ọkwa nke mkpa ọ dị ichetara onye ahịa ahụ ka ọ debanye aha ya. Ndị ahịa dị ka nlebara anya na nlekọta. Nke a pụtara na ọ bụrụ n ’ịmara dịka ọnwere ike maka onye ahịa ya, ọ ga - adịrị gị mfe ịgwa ha okwu ma gosi ha uche gị. Olee otú mejuputa ihe a na omume? Nke ahụ dị mfe! Ọ bụrụ n’idebe ihe banyere onye ahịa gị, ị ga-enwe ‘kaadị opi’ niile! Ọ bụrụ na ị chọpụta na onye ahịa ahụ na-ahọrọ kọfị na ude, ị na-etinye ya na ndetu na oge ọzọ onye ahịa ahụ ga-abịa, ị na-eme ya kọfị na ude, ọ ga-enwe ekele maka nlekọta a ma nwee mmasị n'ebe ị nọ. Ihe omume USU-Soft nwere ndetu ederede na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe ma nyere gị aka ịbanye ozi nke onye ahịa gị n'ụzọ zuru ezu na usoro. Mgbe ị chọrọ ịdị mma, wee nwalee ngwa nyocha anyị nke edepụtara iji mee ka ị bụrụ ụlọ ọrụ ka mma!
Ogwu na ulo ogwu
aza ndị dọkịta
na-aza ajụjụ maka ụlọ ọgwụ
aza ajụjụ maka ụlọ ọrụ ahụ ike
ajụjụ maka ụlọ ọrụ ahụ ike
aza ajụjụ n'ụlọ ọgwụ
mkpesa nke kaadị ọgwụ
mkpesa banyere ndekọ ahụike
aza ajụjụ maka ọrụ ahụike
mkpesa nke ọgwụ
mkpesa nke ọgwụ n'ụlọ ọgwụ
aza ajụjụ maka ụgwọ ọrụ ọgwụ
mkpesa nke nleta nke polyclinic
nyocha na nnabata gbasara ọrụ ahụike
ngwa maka polyclinic
ngwa maka ndi dibia
Usoro ọgwụgwọ ahụike akpaaka
akpaaka nke ulo oru ike
akpaghị aka nke ahụ ike nzukọ
Ihe omume komputa nke ndi dibia
Njikwa maka ụlọ ọgwụ
Njikwa maka ụlọ ọrụ ahụike
Njikwa maka polyclinic
Akụkọ banyere ahụike elektrọnik
Usoro nlekọta ụlọ ọgwụ
Usoro ozi maka otu ahụike
Logbook maka ndekọ ego onye ọrịa
Logbook maka aha ndị ọrịa
Nlekọta nke nzukọ ahụike
Njikwa nke nchọpụta ọrịa
Ijikwa ụlọ ọrụ ahụike
Kaadị onye ọrịa ọgwụ Ambulatory
Ngwaọrụ eji ahụike
Ulo ogwu ulo oru
Usoro ọgwụ gbasara ahụike
ihe omume kọmputa
Usoro kọmputa ọgwụ
Mmemme ozi gbasara ahụike
Usoro ozi gbasara ahụike
Logbooks na ahụ ike maka ịkọ ego
Mmemme ahụike nke ndị dọkịta
Usoro ọgwụ maka ịkwụ ụgwọ
Akaụntụ ndị ọrịa
Polyclinic na-aza ajụjụ
Ihe omume maka ulo ogwu
Ihe omume ogwu
Mmemme maka ịhọpụta na ndị dọkịta
Mmemme maka ụlọ ọrụ ahụike
Mmemme maka ndị dọkịta
Mmemme maka akụkọ banyere ahụike elektrọnik
Mmemme maka ọrụ ahụike
Mmemme maka ịgwọ ọrịa onye ọrịa
Mmemme maka polyclinic
Mmemme maka etiti ọgwụgwọ
Akụrụngwa maka ụlọ ọrụ ahụike
Sistemụ maka polyclinic